1. လူအများအပြားတွင် Instagram အကောင့်ဟောင်းများ ရှိ၍ မသုံးစွဲတော့ကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပိတ်ပြီးသင့်အကောင့်ကိုတစ်ယောက်တည်းမထားနိူင်သောကြောင့်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်အွန်လိုင်းတွင်ရှိနေ ဦး မည်။ ထို့ကြောင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ရုပ်ပုံများကိုအခြားသူများမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုပိတ်ပင်ရန်။ ဒီနေ့ Instagram အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖျက်ရမလဲဆိုတာခြေလှမ်းတွေမိတ်ဆက်မယ်။ Instagram အကောင့်ကိုဖျက်လိုက်ရင်နည်း ၂ နည်းနဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ Instagram အကောင့်ကိုခေတ္တပိတ်ပြီးအမြဲတမ်းဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ သင်မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုသိလိုလျှင်သွားကြည့်ပါ။
2. Instagram အကောင့်တစ်ခုအားခေတ္တပိတ်ထားပုံ
3. Instagram အကောင့်အားခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းအတွက်၎င်းသည်အကောင့်ပိုင်ရှင်၊ နောက်လိုက်များနှင့်ပြည်သူလူထုအားအများပြည်သူသိရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည် အကောင့်များကိုကြည့်။ မရပါ သို့သော်ဤသို့သောအကောင့်ပိတ်ခြင်း၏အားသာချက်မှာနောင်တွင် activation ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ Instagram အကောင့်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းစေသည့်အဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ပထမ၊ သင်သွားပါ https://www.instagram.com/ သင်၏ Instagram အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဘရောက်ဇာမှသာဝင်ရမည်။ Instagram အက်ပ်မှတဆင့်ပိတ်။ မရပါ
4. စနစ်သို့ logged တဲ့အခါ သင်၏ပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာကိုရိုက်ထည့်ရန်နှိပ်ပါ။
6. ပရိုဖိုင်းကိုတည်းဖြတ်စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်သည့်အခါနောက်ပိုင်း သင်တစ် ဦး ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်။ "ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုခေတ္တပိတ်ထားပါ"
7. ထို့နောက်သင့်အကောင့်အားခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်သင်၏ Instagram အကောင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်အကြောင်းပြချက်ရွေးရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါလိမ့်မည်။ သင်အားလုံးပြီးပါကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ “ သုံးစွဲသူအကောင့်အားယာယီပိတ်ထားသည်”
8. Instagram အကောင့်ကိုအမြဲတမ်းဘယ်လိုဖျက်မလဲ
9. သင်၏ Instagram အကောင့်အားအမြဲတမ်းဖျက်ခြင်းသည်သင်၏အကောင့်နှင့်သင်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုအမြဲတမ်းဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြန်၍ မရနိုင်ပါ Instagram အကောင့်ကိုအပြီးတိုင်ဖျက်ရန်ခြေလှမ်းများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ပထမဝက်ဆိုက်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့် Instagram အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် >> https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ သို့သွားပါ။ ပြီးရင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ "ဖျက်ပါ .. (သင့်အကောင့်နာမည်) .. " ပြီးပြီ။ သို့သော်၊ ဖျက်ရန်အကောင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးလျှင်သင်၏အကောင့်ကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဝှက်ထားလိမ့်မည် သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲနှင့်အချိန်တွင်ဖျက်လိမ့်မည် အကယ်၍ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ်ပါကသင်၏အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ အကောင့်ဖျက်မှုကိုသင်ပြန်ယူနိုင်သည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်နှင့်အချိန်ကုန်လွန်ပါကသင်၏အကောင့်ကိုအပြီးသတ်ဖျက်သိမ်းပြီးပြန်လည် ထုတ်ယူ၍ မရပါ။